Electron 7.0 dabere na Chromium 78, Node.js 12.8.1 na ndị ọzọ na-abata | Site na Linux
Ihe ndi Electron bu bu Chromium, Node.js, na V8. A na-ahazi akụrụngwa na Node.js, na interface dabere na ngwaọrụ Chromium, akụkụ mepere emepe nke Google Chrome. LNode.js modul dị maka ndị mmepe, yana API dị elu iji mepụta igbe mkparịta ụka nke ala, mejupụta ngwa, mepụta menus ndị gbara ya gburugburu, jikọta ya na sistemụ ọpụpụ ngosi, jikwa windo ma nwee mmekọrịta na sistemu Chromium.
N'adịghị ka ngwa weebụ, Mmemme ndị dabeere na Electron na-abịa n'ụdị faịlụ ndị nwere onwe ha na-enweghị njikọ na ihe nchọgharị.
N'okwu a, onye nrụpụta ahụ agaghị echegbu onwe ya maka ịtinye ngwa maka nyiwe dị iche iche, Elektron ga-enye ike iwulite maka sistemụ niile Chromium dakọtara. Electron na-enyekwa ngwaọrụ iji hazie nnyefe akpaka na ntinye nke mmelite (enwere ike ịnapụta mmelite site na ihe nkesa dị iche ma ọ bụ site na GitHub).
1 Kedu ihe ọhụrụ na Electron 7.0.0?
2 Esi nweta Electron na Linux?
Kedu ihe ọhụrụ na Electron 7.0.0?
Newdị ọhụrụ a nke usoro na-agụnye mmelite si ihe ya di iche iche dika Node.js 12.8.1, Chromium 78 na igwe 8 V7.8.
E wezụga nke ahụ, ọ dịkwa mkpa igosipụta nke ahụ nkwụsịtụ ahụ cherea na mbụ E yigharịrị ịkwado usoro Linux 32-bit (ọzọ) ya mere ụdị nke Electron 7.0 a dịkwa na ụdị 32-bit.
Ndị mmepe gbakwunyere nsụgharị nke Windows maka ụkpụrụ ụlọ 64-bit Arm na mwepụta ọhụrụ a na mgbakwunye na ipcRenderer.invoc () na ipcMain.handle () usoro maka asynchronous arịrịọ / nzaghachi IPCs.
Wepụtara ụdị ọhụrụ nke Node.js 13.0
Ihe ohuru n'ime Electron 7.0 bu API ọhụrụ "nativeTheme" iji gụọ ma zaghachi mgbanwe na gburugburu na sistemụ agba agba agba.
N'aka nke ọzọ na-ad na-apụta ìhè mgbanwe na generator ọhụrụ nke typeScript iji mepụta nkọwa doro anya karị site na klaasị ihe atụ C #. Ebumnuche nke a bụ iji mepụta ngwa weebụ etinyere ebe ndị sava n'akụkụ na ụdị ndị ahịa na-arụ ọrụ.
N'etiti atụmatụ ọhụrụ nke kwụpụtara, anyị nwere ike ịchọta:
The SystemPreferences.isDarkMode () API ugbu a na-akwado Windows.
SistemuPreferences.isHighContrastColorScheme () API ka akwadoro macOS.
CaptureMode na maxFileSize nhọrọ na Netlog API.
A ọhụrụ ọdịdaReason oke na webContents.print () callback ọrụ.
Usoro getBalls () ka BrowserView.
Nkwado maka trai API òké aga ihe omume na Windows.
Na-enyere W3C Report API.
Emejuputara BrowserWindow.setFocable etinyere na macOS.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, bụ nke ahụ Ndị otu Electron kwukwara na mbipute nke Eleron 4 eruola na njedebe nke ndụ ya, dịka usoro nkwado si dị.
Na njedebe nke nkwado a, ndị otu Electron na-atụ aro na ndị mmepe na-anọgide na-arụ ọrụ na nsụgharị a nweta nkwalite na ụdị ọhụụ nke usoro a.
Ndị otu ahụ gbakwunyere na n'ime oge dị mkpirikpi, ha nwere ike ịtụ anya na ha ga-aga n'ihu na-elekwasị anya na imepụta isi ihe Electron, gụnyere Chrome, Node.js na V8 Echiche bụ ịmalite ụdị nke Electron na nsụgharị ọhụrụ nke ihe ndị a.
Esi nweta Electron na Linux?
Iji mee ngwa na / ma ọ bụ rụọ ọrụ na Electron n'ime Linux, Naanị anyị ga-enwerịrị Node.JS na sistemụ ahụ na onye njikwa ngwugwu NPM ya.
Iji wụnye Node.JS na Linux, ị nwere ike ịga na post ebe anyị na-ekwu maka ya ụdị ọhụrụ nke Node. JS 13 na njedebe nke ya ị ga-ahụ iwu nwụnye maka ụfọdụ nkesa Linux dị iche iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Electron 7.0 dabere na Chromium 78, Node.js 12.8.1 na ndị ọzọ na-abata